बाजुराले नचिनेको स्वर्गजस्ताे बडिमालिका [फाेटाे फिचर]
छिमेकी मुलुक भारतकको जम्बु–कस्मिरमा छायांकन भएका चलचित्रका दृश्य देख्दा लाग्छ हामी त्यो भन्दा कम छैनाैं । फरक छ त केबल उनीहरूलार्इ विश्वले नियाल्छ, हामी अाफ्नै देख्दैनौं । किन अहिलेसम्म यस क्षेत्रको एउटा गतिलो डकुमेन्ट्रीसम्म पनि बन्न सकेन ? प्रश्न उब्जिन्छ । उत्तर दिनेहरु भन्छन्– बजेटको अभाव, बाटो घाटोको समस्या । अहँ, पंक्तिकारलाई त्यस्तो लाग्दैन । मलाई लाग्छ– ‘बिग बजेट होइन, मास्टर माइण्डको खाँचो छ ।
यी प्रतिनिधिहरुको पार्टी र विचारधारा भलै फरक–फरक होला, तर बाजुराको विकासका लागि उहाँरुको आवाज एउटै हुनैपर्छ । यो आम बाजुरेली जनताकै सोच हो । यो पंक्तिकारले राजनीतिक नेतृत्वमा विगतदेखि बर्तमानसम्म देखेको र मनन गरेको समानता एउटै छ– चुनावताका भोट बटुल्न बाड्ने सुन्दर सपनाले भरिएका घोषणपत्र, अनि सडक र सदनमा उठाइने उही पर्यटका सम्भावना र विद्युत क्षमताका कुरा । तर, बत्ति विनाको अध्यारो, साँघुको जोखिम यात्रा, बाढी पहिरोको पीडा भोग्ने त स्थानीय जनता न हुन् । अझ दोस्रो संविधानसभा चुनावको त कुरै नगरौं । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी झण्डै आधि दर्जन नै सभासद् थिए बाजुराबाटै । अहँ विकासले अपेक्षाकृत गति लिएको देखिएन ।
राजनीतिक प्रसंगका कुरा कोट्याउँदा धेरै बहकिएछु । पंक्तिकारका कुरा चित्त नबुझे माफी चाहान्छु । यो पंक्तिकारले पनि अझै यो बडिमालिकाको उकाले चढ्न पाएको छैन । बाजुरा बासी भएकै नाताले तस्विर देखेकै, भने–सुनेकै भरमा काठमाडौं खाल्डोबाटै कलम चलाएको मात्र हो । छुटेका कुरा धेरै होलान् । मभित्र पनि उही अदूर दृष्टिको दोष जो छ । एकदिन अवश्य बडिमालिकाको बढोत्तरीमा रहमाउने चाहना राख्दै पुनः प्राकृतिक मनोरमामै जोडिन्छु । प्रदेश नम्बर ७ कै विकट जिल्ला बाजुरामा बहुआयामिक विकासका सम्भावना छन् ।
अथाह सम्भावना बोकेको देवभूमि, धार्मिक पर्यटन, आस्थाको केन्द्र, लोपोन्मुख जडिबुटीको विशाल भण्डार बडिमालिका, बुढीनन्दा, त्रिबेणिधाम, नाटेश्वरी माई लगायत छन् हाम्रा सम्पत्ति । यिनीहरुको प्रचारप्रसार सँगै संरक्षणमा हामी नजुटे को जुट्ने ? हामिले नगरे कस्ले गर्ने ? अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? हातेमालो गरौं सामाजिक एकताका साथ लामबद्ध बनौं । भनेजस्तो यी प्राकृतिक सुन्दरतासँग प्रत्यक्ष स्पर्स गर्न त्यति सहज छैन । अप्ठ्यारो गोरेटो बाटोको कष्ट सहनैपर्छ । भोक प्यास र थकानले लखतरान बन्नैपर्छ । तर यहाँका प्राकृतिक छटासँग प्रत्यक्ष स्पर्स गर्ने वातावरण मात्रै सिर्जना गर्न सक्यौं भने पनि हाम्रा धेरै समस्या टर्नेछन् । यो पंक्तिकारको दाबीमात्र होइन विश्वास पनि हो । अब बडिमालिकाले पयर्टन पर्खिन जनैपूर्णिमा नै कुर्नु हुँदैन । स्वदेशी नागरिकमात्र नभएर विदेशी पर्यटकको नजरमा पार्नका लागि अब हामीले के के गर्नुपर्ने हो सवै तह र तप्काबाट स्वविवेकले लागौं ।यत्ति कामना... ।